कुनाकानी : मेरो परिवेश: 2012
‘ भो पत्रकारिता गर्दिन ’
पत्रकार अशोक सिलवालद्वारा लेखिएको पुस्तक कलम पढियो । पुष्करलाल श्रेष्ठको रोमाञ्चक पत्रकारिता उपशिर्षक दिइएको यस पुस्तकले पत्रकारितामा केही गर्ने अठोट लिई यसमा लागेका नवपत्रकार र विश्वविद्यालयमा पत्रकारितालाई अघि बढाइरहेका अध्ययनकर्तालाई नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारिताको वास्ताविक धरातलीय यथार्थ के हो के ? यहाँ स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता सम्भव छ ? पत्रकारितामा कसले लगानी गर्छन् ? स्वतन्त्र भई पत्रकारिता गर्न पत्रकार आफैँले लगानी गरि प्रकाशन चलाउँदा उ कसरी असफल बन्न पुग्छ ? नेपाली पत्रकारहरूको राष्ट्रियताको सवालमा सिमा कहाँसम्म हो ? यि र यस्ता धेरै नसोधिएका नसोचिएका प्रश्नको जवाफ पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्यो । हुन त व्यक्तिगत रुपमा मलाई पनि पत्रकारिताको निश्पक्षता माथि कुनै दुविधा थिएन । यस पुस्तकले मलाई अझै आफ्नो धारणा नै सहि रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदियो । ( पढ्नुहोस् निश्पक्ष हुँदैन पत्रकारिता )
पुष्करलाल श्रेष्ठलाई पुस्तकको पात्र बनाउँदा कतै आत्मप्रचारक प्रवृतीको बात त लाग्ने होइन भन्ने कुरामा आफू बारम्बार सजग भएको कुरा लेखक अशोक सिलवालले एक ठाउँमा उल्लेख गरेका छन् । पुस्तकको गाता हेर्दा सुरुमा सायद धेरैलाई यस्तै लाग्छ । तर जे होस् यस पुस्तकका पात्र पुष्करलाल श्रेष्ठका पत्रकारिताको कथालाई समेट्दा राम्रै अभिलेख बनेको महसूस गरेको छु ।
यस पुस्तकमा उल्लेख भएका महत्वपूर्ण लागेका दुई प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्न लागेको छु ।
प्रसङ्ग — १
यो कुरा त्यतिबेलाको हो जतिबेला नेपाल समाचारपत्रमा दुगड समूह र मुरारका समूहको बढि सेयर लगानी थियो । पुष्करको चौथो अंग भन्ने स्तम्भमा पत्रकारितामा हुने गरेका गलत क्रियाकलापलाई लक्षित गरेर लेखहरू छपाउने गर्थे रे । त्यतिबेला कामना प्रकाशनका सेयर धनिहरु दुगड ग्रुप र मुरारका ग्रुपका बारेमा कान्तिपुर दैनिकले खेदो खनेर धेरै अफहवा फैलाएको, गायक उदित नारायण झाको जेठी श्रीमतीको बारेमा कामनाले लेखेका कुरालाई थाकछोप गर्ने तरिकाले विभिन्न अनावश्यक समाचार लेखेर छपाएको जस्ता घटनाले गर्दा कान्तिपुर प्रकाशनले गरेका गल्तीलाई पर्दाफास गर्नै पर्छ अन्यथा मिडिया मनोपोलीले पत्रकारितालाई छायाँमा पार्छ भन्ने महसुस गरी उनले एउटा लेख तयार पारे ।
संयोग भनौ कि दुर्भाग्य : उनको त्यो लेख कुमुद दुगडले देखेछन् । ‘ ल राम्रो लेख्नुभएछ ’ उनको पहिलो प्रतिक्रिया यस्तै थियो । तर केही घण्टा पछि त्यो लेख छपाउने अन्तिम तयारी भइरहँदा उनैले फोन बाटै आदेशको शैलीमा यस्तो भनेछन्– ‘ तपाइँले यस्तो लेख तयार गर्दै हुनुहुन्छ धन्न मैले समयमै थाहा पाएछु , त्यो लेख नछाप्नुहोला । तपाइँ त पत्रकार मान्छे यसले फरक नपर्ला तर हामी त व्यापारी हौँ , तपाइँको लेखले कान्तिपुरसँग हाम्रो मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ हुनसक्छ त्यसैले त्यो लेख नछाप्नु ।’
पहिलोपल्ट पत्रकार भइकन अरु कसैले उनको कलम खोसेको महसुस भयो । कान्तिपुरका प्रकाशक र कामना प्रकाशनका दुई शेयरधनि बीच होटलमा भेटघाट भएर अबदेखि दुई प्रकाशन संस्थाले एक अर्काको बारेमा नलेख्ने गरि सम्झौता गरेका रहेछन् र पुष्करलाई यसप्रकारको फोन आएको थियो । पत्रकार भइकन पनि स्वतन्त्र भई लेखेको लेखलाई आफ्नै पत्रिकामा छपाउन नपाउँदा एक प्रकारको ग्लानी महसुस गरे उनले । यो घटनासँगै उनले आफ्नो चौथो अंग स्तम्भ नै बन्द गरिदिए ।
प्रसङ्ग — २
समाचारपत्रमा नेपालको सुस्तामा भएको सिमा अतिक्रमणबारे तस्वीर सहित समाचार छापिएपछि पुष्करलाल श्रेष्ठलाई भारतीय राजदुताबासबाट फोन आएछ । ‘ पुष्करजी, तपाइँ बिना प्रमाण यस्तो समाचार छाप्ने ? यसले तपाइँ हाम्रो सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ, यसलाई सच्याइहाल्नुस् है ।’ जवाफमा उनले त्यो समाचार हावादारी नभई सम्बाददाता खूद स्थलगत रुपमा गई समाचार लेखेको हो, यो भारतको विरोधका लागि लेखिएको समाचार नभई नेपालको सिमाको समस्यालाई उठान गरेको मात्र हो भनेछन् ।
केही समयपछि पनि प्रमाणित रुपमा त्यसका फलोअप समाचारहरु प्रकाशित भइरहेपछि धम्कीको शैलीमा फेरी दूतावासबाट फोन आएछ – ‘ मैले तपाइँलाई भनेको कुरा खानुभएन, यसले हाम्रो सम्बन्धमा दरार आउनसक्छ । ’ यसरी फोन आएको केही समयपछि नेपाल समाचारपत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन आउन छोडे, कतिपय सम्झौता भइसकेका विज्ञापन पनि रद्द गरिए । आफ्नो गणतन्त्र दिवसको दिन नेपालका सबै ठूला दैनिक पत्रिकालाई सिंगै पेजको विज्ञापन दिने गरेको दूतावासले त्यसवर्ष नेपाल समाचारपत्रलाई विज्ञापन दिएन ।
यस कदम बाट भारतले नेपालका मिडियालाई कून दृष्टिकोणले हेरेको रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो । तैपनि पत्रिका त चलाउनै थियो । भारतीय कम्पनीका विज्ञापन नआएकै सही तर नेपालका ठूला उद्योगपतिहरूको सेयर भएको पत्रिका भएकोले तिनकै विज्ञापन पनि त छँदैछ नि । पुष्करले यसरी मन बुझाएछन् । तर भैदियो ठिक उल्टो । ‘ पुस्करजी, तपाइँले विचारै नगरी समाचार छापिदिँदा हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको छ । पहिला पहिला भेटघाट, पार्टीमा बोलाइराख्ने दुतावासले हामीलाई वास्तै गर्न छोडेको छ, हाम्रो व्यापारमा यसले कति असर पु¥याउँछ तपाइँलाई कुनै अन्दाज छ ? आफ्नै प्रकाशनका सेयरहोल्डर साथीहरूको यस्ता कुरा सुनेपछि उनि थच्चारिए । त्यसमाथि उनीहरूले आफ्नो विज्ञापन छाप्दा भारतलाई चिढ्याय जस्तो हुने भन्दै आफ्नै विज्ञापन पनि दिन छोडे ।
प्रकाशन त्यतिबेला बैँकको ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको थियो । एक मनले त अब जेसुकै होस् प्रकाशन नै बन्द गरिदिउँ भन्ने मनमा आएछ, फेरी बैँकमा ऋणको लागि राखेको धितो जति त पुष्करकै पुख्र्यौली पारिवारिक सम्पत्ति थियो । उनको मथिङ्गल घुम्न थाल्यो ।
पत्रिकाको लागि कच्चा पदार्थ खरिद गर्न पैसा अभाब, समयमा कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने दबाब, अनि भएजति ठूला विज्ञापनको कटौति । यी र यस्ता कारणले तनावमा आएर उनी बिरामी नै परे । ‘राष्ट्रियताको लागि कुरा उठाउँदा यस्तो तनाव ! बेकार पो यस मुद्धालाई उठाइएछ कि क्याहो ? यस्तो सोच्न उनि वाध्य भएछन् । पछि उनकै सहयोगिहरुले दुताबासमा कुरा चलाएर राजदूत शिवशंकर मूखर्जीलाई भेट्न दूताबास गए । कुनै समाधान नदेखेपछी, त्यहाँ उनि आफूलाई भारत विरोधी होइन भनि स्पष्टिकरण दिन पुगेका । त्यहाँबाट निस्कँदा कुनै अदालतको कठघरामा आफूलाई निर्दोष छु भनि स्पष्टिकरण दिएको अपराधि जस्तो पो भएको महसुस गरिरहेका थिए । त्यसपछि उनको मनले भन्यो – ‘भो, अब पत्रकारिता गर्दिन ।’
माथिका प्रसङ्गहरू पढेपछि आफूलाई जिम्मेवार पत्रकार हुँ भन्नेहरूले आफू किन पत्रकारिता गरिरहेको छु भन्ने सोच्न वाध्य हुनुपर्छ । सत्यकुरा पाठक, दर्शक र श्रोतामाझ ल्याउन की अरु कसैको स्वार्थको गोटि हुन ? यी र यस्ता घटनाक्रम स्वच्छ पत्रकारितामाथिको (Threat) चुनौतीको हो । जुन प्रत्येक क्षण नेपाली मिडियाको कुनै न कुनै प्रसङ्गमा, समाचारमा दोहोरिरहेका हुन्छन् ।
Posted by वसन्त बलामी at 1:27 PM No comments:
पुरानो गीत सुन्नुको मज्जा
पुराना नेपाली गीतका संगीत र शब्दले मन भरिन्छ । तर original नभेटिएपछि यहि रिमिक्सले नै मन भरेँ ।
तपाइँ पनि क्लिक गरी सुन्नुस् है ।
Posted by वसन्त बलामी at 7:42 PM No comments:
सेलिब्रेटीका ठूला कुरा
नेपालका सेलिब्रेटी भनाउँदाहरुका अन्तरवार्ता आएपछि कसो कसो पढुँ न त भन्ने लागेर पढ्न सुन्न र हेर्न लाग्छु । यि अन्तरवार्तामा प्रायः सबै प्रश्न र उत्तरहरू उस्तै हुने गर्छ अनि बेकार पढिएछ , हेरिएछ भन्ने लाग्छ । अझ झर्को लाग्ने कुरा त के भने, सबैलाइ नछुटाइने एउटा प्रश्न — “तपाइँलाइ आफ्नो कमजोरी के हो जस्तो लाग्छ ?”
यो प्रश्न जति झर्को लाग्दो छ , यसको उत्तर झन् बढि झर्को लाग्दो छ ।
हजुर तपाइँले पनि यसको उत्तर ख्याल गर्नुभएको होला — “म जोकोही मान्छेहरूलाई पनि चाँडो विश्वास गर्छु । यो बानी चाहिँ सुधार्नै सकिएन ।”
अधिकांश सफल ठानिएका सेलेब्रेटीका यस्ता कुरा सुनेर हैरान हुन्छु ।
अरुलाई धेरै विश्वास गर्ने मान्छे सायदै यसरी चर्चामा चुलिन्थे होलान् । अनेक ठाउँमा धोका हुन्थ्यो, धेरै क्षति हुन्थ्यो होला । पाठक, श्रोता र दर्शकका आँखामा छारो हालेर यस्ता उत्तर दिनेहरू प्रति दया आउँछ । कठै .. । यिनको यो नराम्रो बानी चाहीँ चाँडै सुध्रोस् है । हामी शुभचिन्तकहरु यहि त कामना गर्न सक्छौँ क्यारे अरु त के गर्न सक्छौँ र ? की कसो ?
Posted by वसन्त बलामी at 5:29 PM No comments:
Labels: खै के खै के ?
Life Is Beautiful हेरेपछि
चलचित्रले समाजको लागि योगदान दिनुपर्छ, यो मनोरञ्जनको साधनमा मात्र सिमित रहनु हुँदैन भन्ने मान्यताले गर्दा केहि चलचित्रहरू हाम्रा दैनिक जीवनका प्रत्येक घटनामाथि पनि बनिरहेका छन् । साहित्यिक कृतिमाथि पनि चलचित्र बनिरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि इटालीमा केही यस्तै गम्भीर प्रकारका चलचित्रहरू बनेका छन् । जून आज पनि त्यतिकै सान्दर्भिक लाग्छन् । यहाँ यस्तै खालको एउटा चलचित्रको चर्चा गर्दैछु ।
जीवन के हो ? जीउने विधि के हो ? कसरी बाँच्दा उपयुक्त हुन्छ ? आफ्नो जीवनलाइ कस्तो पाउनुहुन्छ ? यी र यस्ता जीवन माथिका प्रश्नमा धेरै विद्वानहरूले आफ्ना ज्ञान बाँडेका छन् । तैपनि यसमाथिको बहस अनन्त छ । हेर्ने र भोग्नेका नजरमा निहित हुन्छ जीवन । कसैले यसलाइ एउटा खेल सम्झन्छन् , कसैले संघर्ष , कसैले धोका , कसैले वाध्यता यसलाइ धेरै कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । जीवनलाइ एउटा रमाइलो खेलको रुपमा देखाइएको चलचित्र हो– Life Is Beautiful ।
Guido एक यहुदी पुरुष हो । उ शहरमा एउटा किताब पसल चलाउने सपना लिएर आएका छन् । तर यो तत्काल सम्भव नभएकोले एउटा रेष्टुरेन्टमा वेटरको रुपमा काम गर्छन् । उनका लागि प्रत्येक दिनहरू सुन्दर छन् । अझ एउटा साथीले विद्वान Schopenhauer को ‘इच्छा शक्तिमा धेरै शक्ति छ, भित्री मनले इच्छा गर्दा जे पनि प्राप्त हुन्छ’ भन्ने कुरा सुनाएपछि त यसलाइ गज्जबले प्रयोग गरिरहन्छन् । त्यसैले उनि आफ्नो प्रेमिका (Dora) लाइ उनको विवाहको घोषणासभा बाटै भगाएर बिहे गर्न पनि सफल हुन्छन् । चलचित्रको आधा भागमा यस्तै रमाइलो हाँसो ठट्टाले भरिएको छ ।
बिहेको करिब पाँच वर्ष पछिको दृश्यमा उनले एउटा सेकेन्डह्याण्ड किताब पसल खोलिसकेका हुन्छन् । उनको एउटा छोरो पनि हुन्छ– Joshua । उनि खेलौना खेल्न रचाउँछन् । बाबु आमाको प्यारो उसलाइ नुहाउन पटक्कै मन पर्दैन नुहाउने कुरा उठ्यो की लुक्न थाल्छन् । (यसदृश्यले धेरैले आफ्नो बाल्यकाल सम्झिन्छन् ।) उनको जन्मदिनमा एउटा नयाँ खेलौना ट्याङ्क ल्याइदिन उनि आफ्नो बुबालाइ फकाइरहेका हुन्छन् ।
छोरालाइ लुकीबसेको ठाउँमा खानेकुरा दिँदै Guido
अचानक शहरमा हिटलरका सैनिकहरू परेड खेल्न थाल्छन् । शहरमा बसोबास गरिरहेका यहुदीहरूलाइ पक्राउ गरेर उनिहरूलाइ अज्ञात ठाउँमा लैजान्छन् । Guido पनि एक यहुदी भएकोले उनलाइ उनको छोरा सहित गाडी र रेलमार्ग हुँदै लगिन्छ । बालक Joshua बाबुलाई आफूहरू कहाँ जाँदैछौँ भनि प्रश्न गर्दा उनको जन्मदिन मनाउन कतै टाढा जान लागेका छौँ भन्दै उनका प्रत्येक बालसुलभ प्रश्नका उत्तर दिँदै जान्छन् ।
Guido की पत्नी यहुदी नभएकिले उनलाइ भने सैनिकले लग्दैनन् तर आफ्नो पति र छोरालाइ लगेको थाहा पाएपछि उनि पनि त्यहि रेलमा चढ्छिन्, एउटा अज्ञात यात्रामा ।
एउटा बन्द क्याम्प जस्तो देखिने इलाकामा रेल प्रवेश गरेपछि त्यहाँ उनिहरूको बस्ने ठाउँ अनि कामबारे जर्मन भाषामा बताइन्छ । छोरालाइ आफूहरू यातनागृहमा भएको कुरा थाहा नदिइ त्यहाँ एउटा खेल खेल्न आएको र जसले धेरै अंक ल्याइ यो खेल जित्छ उसले नयाँ खेलौना ट्याङक पाउँछ भनि बुझाउँछन् । छोरालाइ सुत्ने ठाउँमै दिनभरि बस्न लगाइ Guido अरु यहूदिहरू सँगै त्यहाँको फलाम फ्याक्ट्रीमा उनिहरूलाइ अह्राए अनुसार गह्रुँगो फलाम बोक्छन् । त्यो ठाउँमा जो जहिलेसम्म काम गर्न सक्छन्, त्यतिन्जेल मात्र बाँच्न पाउँछन् । काम गर्न नसक्ने भएपछि सेनाले गोलि हानेर मारिदिन्छन् । उता Guido की पत्नी पनि त्यसरी नै काममा खटिएका हुन्छन् । त्यहाँ बुढाबुढीहरू र बच्चाहरूलाइ काम लगाइँदैन भन्ने थाहा पाउँदा कम्तिमा बच्चाका निम्ति त सैनिकहरू दयावान रहेछ भन्ठानेकी उनी त्यतिखेर भावशुन्य हुन्छिन् जब सैनिकहरूले उनिहरूलाई ग्यास च्याम्बरमा राखेर हत्या गर्छन् भन्ने थाहा पाउँछिन् । आफ्ना पति र छोरा ल्याइएकोले आएकी उनी उनिहरूको अवस्था थाहा पत्तो नहुँदा किंकर्तव्यविमुढ हुन्छे । तर सबैको आँखा छल्दै आफूहरू सुरक्षित रहेको भन्ने जानकारी दिन Guido माइकिङ गर्ने, बजिरहेको गीतमा पत्नीलाइ मनपर्ने अपेरा बजाइदिने गरेर यस बन्दीगृहमा नदेखे पनि एक अर्कालाइ महसूस गर्न सकिरहेका हुन्छन् ।
धेरै दिनसम्म बाहिर डुल्न पनि नगइ लुकेर बस्न सके (लुकामारी जस्तै) यस खेलको अंक बढ्छ भन्ने आशा दिएर लुकाइएका छोरा Joshua बस्दा बस्दा दिक्क लागेर घरमा जाने अनि आमालाइ भेट्ने भनि अड्डी लिन्छ । ‘हामीले खेल जित्न लागेका थियौँ, ल ठिकै छ जित्ने खेल पनि नखेलि घर जान्छु भन्छौ भने हिँडौँ न त’ भन्दै Guido छोरालाइ जीत प्रति लोभ्याउँछन् ।
केही दिनपछि अमेरिकी सेनाले त्यो ठाउँमा धावा बोल्छ । बाहिर गोलाबारुद चलिरहेको हुन्छ अनि यो नै त्यस ठाउँबाट बाहिरिने र पत्नीलाइ पनि छुटाउने मौका हो भन्ने सम्झेर छोरा Joshua लाइ एउटा बाकसमा लुक्न लगाएर Guido बाहिर निस्कन्छन् पत्नीको खोजिमा । अहिले चलिरहेको खेल लुकामारी जस्तै भएकोले बाहिरको होहल्ला र मान्छेको पदचाप बन्द भएपछि मात्र निस्कनु अनि मात्र धेरै अंक ल्याएर जित्न सकिन्छ भन्दै छोरालाइ त्यहाँ लुकाएका हुन्छन् । तर यस बिचमा Guido लाइ जर्मन सेनाले पक्रिन्छ र उनको हत्या हुन्छ ।
रातभरको घमासान युद्धपछि बिहान सबै शुन्य भएपछि Joshua बाहिर निस्कन्छन् र आफ्नो पछाडी आइरहेको सेनाको ट्याङ्क देख्छन् । सेनाले उसलाइ बोकेर ट्याङ्कमा बसालेर लैजान्छन् । बाटोमा आफ्नी आमालाइ देखेर बोलाउँछन् अनि भन्छन् –“आमा हामीले यो खेल जित्यौँ अनि हेर्नुस् त मैले साँच्चै नयाँ ठूलो ट्याङ्क पाएँ । ” Dora आँखाभरी आँशु राखेर आफ्नो छोरालाइ अंगाल्दै भन्छिन् –“हो हामीले जित्यौँ” । यसरी चलचित्र सकिन्छ ।
“हो हामीले जित्यौँ”
चलचित्रको आधा भागसम्म रमाउँदै , हाँस्दै चलचित्र हेरिरहेका दर्शक हिटलरको सैनिकको प्रवेश पछि प्रत्येक क्षण मुटु कमाउँदै आफ्ना पात्रहरूको बचाउमा प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन् सायद । यस चलचित्रको कथनशैली सरल छ , अभिनय एकदमै प्राकृतिक छ । हिटलर कालिन समयमा प्रवेश गरेको झल्को पनि यसले दिन्छ । सन् १९९७ मा निर्माण भएको Roberto Benigni द्वारा निर्देशित यस चलचित्रले क्यान चलचित्र महोत्सवमा विदेशी भाषाको सर्वोकृष्ट चलचित्रका साथै अन्य धेरै विधामा पुरस्कार पाएको थियो ।
चलचित्र कस्तो हुनुपर्छ ? चलचित्रले कस्ता विषय समेट्न सक्छ ? चलचित्र क्षेत्रमा आफूलाई अलग देखाउन चाहनेहरूले यो चलचित्र हेर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
Posted by वसन्त बलामी at 2:06 PM No comments:
पहिलोपल्ट वि.पी. लाइ पढ्दा
चिसापानी ब्लग,बुक संसार र श्रुतिसंवेग बाट साहित्यलाइ सुन्न सकिने कुरा थाहा पाएदेखि डाउनलोड गर्दै सुन्न थालेको छु । अचेल उपन्यासहरु सुनेर पढ्ने गरेकोले नयाँ अनुभूति गरिरहेको छु । प्रत्येक बिहान काममा हुँदा नै मेरा कानमा उपन्यास वाचन चलिरहने हूँदा समयको पनि सहि उपयोग भएको जस्तो लागेको छ ।
वि.पी. कोइरालाले लेखेको उपन्यास सुम्निमा श्रुतिसम्बेगबाट डाउनलोड गरेर सुनियो । फ्रायडको यौनमनोविञान लाई आफ्नो रचनामा जमाएर व्यक्त गर्ने साहित्यकार वि.पी. कोइरालाको यसअघि पनि केही किताब पढ्ने कोशिस गरेको थिएँ । तर किताब हातमा परेपनि पूरा पढ्न कहिले सकिएको थिइन । यस पल्ट भने आफुले आँखा फारेर अक्षर हेर्न नपरेर हो की अर्कैले पढेर सुनाएकोलाइ कानमा सुनेर हो पूरै उपन्यास सुनिभ्याएँ ।
उपन्यास सुनिसके पछि लाग्यो – उनका कृतिहरु कसैले सित्तैमा पढ्न दिएका भए पनि पढ्न सक्ने थिइन होला । किनकी भाषिक रुपमा यो उपन्यास मलाइ एकदम क्लिष्ट लाग्यो । केही समय यता खगेन्द्र संग्रौला, बुदिसागर, तसलिमा नसरीन जस्ता साहित्यकारको किताब पढिसकेपछि र त्यस अघि पनि साहित्य सरल भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै मेरो थियो ।
यस उपन्यासमा भएका बाल पात्रहरु पनि कति सजिलै दर्शन छाँटिरहेका हुन्छन् भने मैले बालकृष्ण समका नाटकका गाउँका पात्रको संवादलाइ पनि सम्झाइदियो । बाल पात्रको उमेर करिब सात आठ वर्ष भनिएको छ तर उनका संवादमा पूर्णरुपमा लेखक मनमौजी भएर बोलिरहेका हुन्छन् ।
उपन्यासमा आधा त संस्कृत शब्दकै प्रयोग गरिएको छ ।
उपन्यासको कथा भने ठिकै लाग्यो । आफूलाइ पूजा, हवन तपस्या गरेर शुद्द बनाउने नाउँमा एउटा ब्राम्हण समूदायका युवक कसरी निर्जीव हुनपुग्छ ? सांसारिकताको परित्याग गर्ने मन र वंशको परम्परा कायम गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्न गरिने विवाह यि दुइले जन्माएको अन्तर्मनको र बाह्य द्वन्दको गजबको चित्रण यस उपन्यासमा उतारिएको छ ।
किराँत समूदायकी सुम्निमाको निश्चलता र प्राकृतिक सरलताले जनजातीहरुको संग्लो चित्र तयार गरेको छ ।
भाषिक दृष्टिबाट यो उपन्यास पढ्न गाह्रो भएपनि कथानकले भने नौलो अनुभूति नै दिएको छ । त्यसैले यो राम्रै प्रयोग बन्न पुगेको छ ।
Posted by वसन्त बलामी at 4:58 PM No comments:
केही ट्रक सायरीहरू
हिमालमूनि ताल, तालमूनि बेताल
बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धिकै अनिकाल
जन्म मेरो इन्डिया,ट्याक्टर मेरो नाम
कर्म मेरो यस्तै रैछ, भारी बोक्ने काम
कलम रोए अक्षर बन्छ, कवि रोए कविता
धनि मरे श्रद्धाञ्जली, गरिब मरे रमिता
चम्किरहोस् तिम्रो नाम, आकाशको तारा सरी
लम्कीरहोस् तिम्रो पाइला उन्नतीको बाटो भरी
भन्न सजिलो गर्न गाह्रो
अन्न ओखती, व्यथा साह्रो
पैसा गयो प्रेम गयो, अनि गयो व्यापार
दर्शन पनि दूर्लभ भयो, जब दियो उधार
Posted by वसन्त बलामी at 6:53 PM No comments:
दूर्घटनाको साक्षी बन्दा
असार १ गते, बिहानको साँढे पाँच मात्र भएको थियो । एकजना दाजुको मोटरसाइकलमा पछाडी बसेर माइतिघर बाट तिनकुने तिर जाँदै थिएँ । बबरमहल नाघेर बिजुलीबजारको पुल पुग्नै लाग्दा ठूला तौलको सामान खसेर भुईँमा बजारिए जस्तै एउटा ठूलो आवाजले तर्सायो । मोटरसाइकल पनि रोकियो । दाजुले भने – ‘जाउ त त्यो मान्छेलाई उठाइहाल ।’
के भएको हो अत्तोपत्तो छैन । दुइ जना मान्छे दुइतिर लडेका छन् । एकवटा साइकल र मोटरसाइकल पनि ढलिरहेको छ । लडेका मध्ये एकजनाको पूरै शरीर एकदम जोड–जोडले हल्लरहेको छ, हुरुक्कै हुने गरि । म तुरुन्त हिँडेर त्यो लडेको मान्छेलाइ समाउन पुगेँ र मेरो पुरै बलले उसको जीउलाइ उठाएँ । उसको हल्लिरहेको शरिरलाइ समाएरै थचक्क बसाएको थिएँ । पूर्ण रुपमा अचेत देखिने उनको शरीरलाई भर दिइरहँदा मनमा चिसो पस्यो ‘कतै यो मान्छे अन्तिम सास त फेरिरकेको त हैन ?’ उनको कान र कन्चटबाट रगत बगिरहेको थियो ।
लडेको अर्को मान्छेलाई बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरूले उठाउँदै थिए । उनको पनि अनुहारमा नै रगत बगिरहेको थियो । अनि एकैछिनमा जम्मा भएको भिड मध्येबाट कसैले – ‘ल गाडी रोकेर तुरुन्त यिनीहरूलाइ अस्पताल पुर्‍याउँ त’ भने । अनि दुवै तिर बाट आवतजावत गरिरहेका गाडीलाई रोक्दै अनुरोध गरियो तर तिनीहरू ‘के भएछ ?’ भनि र्हेने, रोकिने तर घाइतेलाइ तुरुन्त अस्पतालसम्म पुर्‍याइदिन अनुरोध गर्दा ‘काममा जाँदैछु, व्यस्त छु’ भन्दै कुदाइहाल्ने मात्र देखिए ।
वानेश्वरतिरबाट एउटा प्रहरीको गाडी आयो । के भएछ भनि हेरेर त्यतिकै जान लागेपछि सबैले उनको गाडीमा नै घाइतेलाइ लैजान अनुरोध गर्दा हामी अन्तै ड्युटीमा हिँडेको र आफूले लान
नमिल्ने बताउँदै कतै फोन गरेजस्तो गर्दै त्यहाँबाट तुरुन्तै गइहाल्यो । बाटोमा गुडिरहेको एउटा ट्याक्सीलाइ घाइते लान अनुरोध गर्दा ‘घाइतेको जिम्मा तपाइँ लिने हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेपछि सबैजना अवाक् भए । घाइतेलाइ अस्पताल लैजादाँ बाटोमै तलमाथि भएमा प्रहरी सोधखोजमा सबैभन्दा बढि दुःख यिनै चालकहरूले पाउँछन् भन्ने कुरा पो सुनियो । नेपालको कानुन पुलिसले जानुन् ।
मेरो पूरै बलले त्यो घाइतेको शरीरलाइ भर दिइरहँदा थाकिसकेको थिएँ । विस्तारै उनको शरीर हल्लिन भने कम भएको थियो । केही मानिसहरू आफन्तलाई फोन गरौँ भन्दै उनको मोबाइलमा हेरेर उनलाइ यो को हो भन्दै सोधे तर केही पनि बोल्न नसेका उनले टाउको मात्र हल्लाए । अनि उनको मोबाइलबाट फोन गर्दा कतै पनि फोन लागेन ।
एक छिनमा अर्को प्रहरीको गाडी आएर साईडमा रोकियो । अनि उनिहरु पनि त्यहाँका सर्वसाधारणले गरेजस्तै आवत–जावत गरिरहेका गाडीलाइ रोक्दै घाइतेलाइ लैजान अनुरोध गर्न पो थाल्छ त । सर्वसाधारण बीच कुरा उठ्यो – ‘प्रहरी त घाइतेलाइ आफ्नो गाडीमा लैजान मन गर्दैन भने अरुले मान्लान त ?’ प्रहरीको त्यो चर्तिकला पछि सबैले उनिहरुकै गाडीमा तुरुन्त लैजान अनुरोध गरेपछि बल्ल मैले भर दिएर समाइराखेको घाइतेलाई उनिहरूको गाडीमा राखे अनि अर्कोलाइ फेरी अर्कै गाडीमा राख्न लगाए ।
यो तस्वीरमा देखिए जस्तो दूर्घटना त क्षणक्षणमा भैराख्छन् शहरमा
अचेल शहरमा पलपलमा सडक दुर्घटना हुन थालेका छन् । ठूला सडकमा शिकारु चालकले सवारी चलाएर होस् वा सडकमा आफूलाइ दादा भन्ठान्ने केही सवारी चालक,अनि लापबार्हीपूर्वक मोटरसाइकलमा तिब्र गतिमा सवारी चलाउने चालकहरू यिनीहरुले गर्दा आफ्नो पनि र अरु यात्रुको पनि जीवन खतरामा पारेका छन् । त्यसैले सडक असूरक्षित बन्दै गएको छ । त्यसैले अचेल सडकदेखि डर लाग्न थालेको छ । हिँडेको ठाउँमा सुरक्षित पुगिने त हो ? मनमा एउटा संशय रहने गरेको छ ।
Posted by वसन्त बलामी at 10:04 PM 1 comment:
कुन ठूलो कुरा भयो र ?
केही समय अघि एक जना साथीलाई जरुरी पर्‍यो भनि केही रकम दिएको थिएँ । ‘दुइ–चार दिनमा एक ठाउँबाट पैसा आउनेवाला छ , म त्यो आउनेबित्तिकै तपाइँको रकम फर्काउँछु’ भनि दश हजार रुपैयाँ लिएर गएका थिए ।
हुन त उ म भन्दा बढी कमाउने मान्छे, तैपनि अहिले बाइक किन्नलाइ तत्काललाइ पैसा चाहिएकोले मागेको बताए । ‘फेरी त्यो बाइक अहिले सस्तोमा पाइएको छ पछि त्यति सस्तोमा पाइँदैन !’ उसले पटक पटक अनुरोध गर्‍यो । ‘म सँग पनि त पैसा कहाँ छ र ? दाजुलाइ माग्नुपर्छ । अनि फेरी उहाँलाइ त छिटै दिनुपर्छ नि मैले त ।’ मैले यसो भन्दा उसको जवाफ थियो–“त्यो त कुन ठूलो कुरा भयो र ? मेरो काम भैराखेको साइटबाट पैसा आउने वित्तिकै तिम्लाइ फर्काइहाल्छु नि ।” लौ, उसले फेरी साथीलाइ पनि विश्वास गरेन भनेर कतै चित्त दुखाउने पो हो की ? पछि मलाइ पनि आवश्वकता पर्‍यो भने उसले ऋण दिन सक्छ नि ! मेरो मनले यस्तै सोच्यो । अनि दुइ तिन हप्तामा फर्काइदिन्छु पनि त भनेको छ उसले ! यसरी मैले मसँग भएको दशहजार रुपैयाँ उसलाइ दिएको थिएँ ।
उसले पैसा लिएर गएको झण्डै एकमहिना सम्म पनि उसको नाक मूख देखिएन । नियत खराब भएको मान्छे होइन जस्तो लाग्थ्यो । के भएछ त्यस्तो ? गाउँतिर गएको होला ! बेला बेला गैराख्नुपर्छ उसलाइ । फर्केर आएपछि Contact गरिहाल्ला नि ! यस्तो सोचेर मैले पनि उसलाइ call गरिनँ । तर उ त झण्डै तिन चार महिना सम्म पनि सम्पर्कमा आएन त । फेरी म उनलाइ फोन गर्न थालेँ । फेरी पनि उसको उहि जवाफ ‘कुन ठूलो कुरा भयो र ?’ । धेरै पछि फोन गरेर हैरान पार्दा–पार्दा मैले एकैचोटि दिएको दश हजार रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा करिब छ महिनामा असुल गरेँ । केही अघि एउटा काम आइलागेको थियो । मलाइ ‘यति काम सिध्याउनुस् , तपाइँलाइ यति पैसा दिन्छु’ भन्दै एकजनाले काम जिम्मा लाएको थियो । मैले जिम्मा लिएको काम पाँच दिनमै पूरा गरेको थिएँ । त्यसपछि मलाइ दिइने भनेको पारिश्रमिक लिनको लागि सम्पर्क गरेँ । उनलाइ जतिचोटि फोन गरेपनि आफू ‘मिटिङमा छु, पछि सम्पर्क गर्नुस्’ मात्र भनिरहन्थे । एक पल्ट उसैले मलाइ फोन गरे । ‘पक्कै अब चाहिँ पैसा देलान् जस्तो छ’ भनि दंग पर्दै कुरा गरेको त चुरो कुरो अर्कै रहेछ । “ हेर्नुस् , वसन्त जी अब फेरी यो काम आएको छ यसको पनि तपाइँलाइ यति दिइन्छ ” भन्दै लोभ मात्र पो देखाउँछन् त ! मलाइ भने जंग चलेको थियो अनि कराइहालेँ “के हो पहिलेको कामकै पैसा पाएको छैन फेरी अर्को काम ? सक्दिन गर्न ।” “हैन वसन्तजी, नरिसाउनुस् न ।
हेर्नुस्, हामीलाइ तपाइँको काम गर्ने तरिका मन पर्‍यो त्यसैले माथि हाम्रो Boss नै तपाइँलाइ नियमित काम दिन चाहनुभएको छ । तपाइँ चाहनुहुन्छ भने कामको लागि Agreement पनि गर्न सकिन्छ ।” ‘अहो नियमित काम पाइने !’ मनमनै दंग परेँ । ‘हुन्छ त्यसो भए Agreement पनि पहिले गरौँ न त ।’ उनी बोले– ‘ त्यो त कुन ठूलो कुरा भयो र ? अहिले Boss बाहिर गइरहनु भएको छ, उहाँ आए पछि त्यो भैहाल्छ ।’ नियमित काम पाउने आशमा म फेरी त्यो काम पनि गर्ने निर्णय गरेँ ।
दोस्रो पल्टको काम सिद्धिएको दश दिन पछि मैले नै सम्पर्क गरेर पैसा आउँदैछ की Agreement भनेर बुझ्ने प्रयास गरेँ । जवाफ उहि आयो –‘त्यो त कुन ठूलो कुरा भयो र ?’ तर यो जवाफ आएको हप्ता दिन पछि मात्र पहिलो कामको पैसा दिइयो तर जतिपल्ट Agreement को कुरा गरे पनि जवाफ भने त्यहि आउने गर्‍यो । त्यसपछि सोध्नै छोडेँ ।
यि र यस्ता भोगाइहरु पछि अब एउटा ज्ञान आएको छ । जसले सिधा जवाफ नदिइ कसैलाइ झुलाउने नियत राखेका हुन्छन् , त्यस्ताले दिने जवाफ यस्तै हुँदोरहेछ । त्यसैले अचेल कसैले मेरो सामु आएर “कुन ठूलो कुरा भयो र ?” भने पछि मेरो पारो तातिहाल्छ ।
Posted by वसन्त बलामी at 1:50 PM 1 comment:
चटक र क्रान्ति
- नर्मदेश्वर प्रधान
भोटो जात्रामा भोटोलाई झैँ उसले
चारै कुनाबाट देखायो....
मैले ताली बजाएँ....
उसले क्रान्तिलाई फेरी
खाली झोलामा राख्यो
उसले ताली बजायो, खुब बजायो
तर, यो पालि किन हो
मैले ताली बजाइनँ.....।
(नेपालभाषाका कविको यो कविता नागरिक दैनिकबाट साभार गरेको हूँ ।)
Posted by वसन्त बलामी at 2:56 PM No comments: